Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare 1.8.28 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.8.28 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
✈️Modernတိုက်လေယာဉ်: Combat အေ့စ် PvP ကောင်းကင်စစ်ဆင်ရေးခေတ်သစ် Ace စစ်လေယာဉ်များနှင့်အသံထက်မြန်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များလောကီသားတို့သည်အရန်သင့်အားလွှဲပြောင်း။ လေထုလွှမ်းမိုးမှုကိုအဘို့အဆုံးစွန် PvP လေယာဉ်တိုက်ခိုက်ရေးသေနတ်သမားအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအေ့စ်သန်းပေါင်းများစွာ join ။ လေယာဉ် & Ace လေယာဉ်၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးအပေါ်အကောင်းဆုံးသောမှာ Dogfight လေကြောင်း။
ခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်: Combat အေ့စ် PvP ကောင်းကင်စစ်ဆင်ရေးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး💥💥💥!
သင်တို့ရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံးစစ်တပ်ခေတ်မီမျိုးဆက်လေယာဉ်အဖြစ်ဦးဆောင်လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များစစ်ရှေ့ပြေးပုံစံအပေါ်ကိုတိုက်မည်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးပျံဂိမ်းကိုသင် lit သေနတ်သမားအရေးယူနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဂျက်တိုက်လေယာဉ် Simulator ကိုတွေ့ရမယ်။ ယူပါ-ချွတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကနေသင့်ရဲ့အုပ်တစ်အုပ်တွေ့ဆုံရန်, dogfights အသင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တော် PvP အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း multiplayer mode, ကွဲပြားခြားနားသောမစ်ရှင်နှင့်အတူတစ်ကိုယ်တော်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး, HQ ဝင်ရောက်စီးနင်း, ရှင်သန်မှုပါရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကစစ်မိုဃ်းချုန်း, သင့်အတောင်ပံဖြန့်ဝေ, တပ်မှူးဟောက်နေပါသည်!
အဆိုပါဂိမ်း 2019 ရဲ့အကောင်းဆုံးသေနတ်သမားတစ်ဦးပါ!
- ရေနွေးငွေ့အပေါ် PC ကိုသေနတ်သမား wargames ၌ရှိသကဲ့သို့အံ့ဖွယ်ဂရပ်ဖစ်: dogfight လေယာဉ်၏အပြည့်အဝ-အထူးအသားပေး 3d လက်တွေ့ကျကျမော်ဒယ်များ
- အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ Ace လေယာဉ်မှူးဆန့်ကျင် Wargame နှင့်စစ်ဆင်ရေး: အမေရိကန်, ဗြိတိန်, ဂျာမနီ, ရုရှား, အိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား, ဘရာဇီး, အီရတ်, တူရကီ, ပါကစ္စတန်နှင့်အခြားသော
- dogfight လေယာဉ်ကျော် 26 အမျိုးအစားများ: စစ်မှန်သောစစ်ဆင်ရေးများတွင်အသုံးပြုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာလေယာဉ်, (X-တောင်ပံသို့မဟုတ်ချည်နှောင်-တိုက်လေယာဉ်များကဲ့သို့) နီးပါးကြယ်ပွင့်အာကာသယာဉ် aerobatics နိုင်စွမ်း6မျိုးဆက်3ရှေ့ပြေးပုံစံ: စွန်ငှက်, Raptor, SU, Mig, Raven , Blackbird နဲ့, Nighthawk အများအပြားကပို
- 30 ကျော် dogfight လက်နက်များ: ဒုံးကျည်များ, ဒုံးကျည်, စက်သေနတ်, အပူမီးတောက်
- မော်ကွန်းအဆင့်မြှင့်စနစ်ဖြင့်အချိန်နှင့်အခြား features တွေပြန်ဖွင့်, သင့်ဂျက်လက်နက်, အမြန်နှုန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတိုးတက်စေပါ။ အကောင်းဆုံးကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှင့်အတူ Ace ဖြစ်လာ!
- အွန်လိုင်း & အော့ဖ်လိုင်းဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးဂိမ်းသည် Modes: အကိုရေနှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်၌မြေပြင်ပေါ်တွင်ရန်သူနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တော်ကင်ပိန်း, HQ ဝင်ရောက်စီးနင်း, Survival, multiplayer စစ်ဆင်ရေး,
- ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သေနတ်သမားတည်နေရာ: လေယာဉ်, အသံထက်မြန်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များနှင့်ဒုံးကျည်များနှင့်ကျည်ဆံများကျည်ဆန်မှန်နှင့်ပြည့်စုံတောင်တို့, ပူသဲကန္တာရ, ရေခဲမြေယာထဲ့
✈️Dailyဆုကြေးငွေ, အောင်မြင်မှုများ, non-stop စစ်ဆင်ရေး
wargame မျှစွမ်းအင်များအဖြစ်, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲခေတ်မီဂျက်လေယာဉ်ပစ်! ဂျက်တိုက်လေယာဉ်သင့်ရဲ့လေယာဉ်ရုံတိုးချဲ့ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်မော်ကွန်းဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်နေ့စဉ် Login ။ အေးမြစစ်တိုက်ဆုလာဘ်နှင့်အတူအောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုး
- အပြည့်အဝတိုက်လေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှု: သေနတ်သမား၌သင်တို့ကိုအမြန်နှုန်း, ဒုံးကျည်များ, သေနတ်, အပူမီးတောက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆင်းသက် Perform နှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကနေ-ချွတ်ယူ, တစ်ဦး wargame လေယာဉ်မှူးဖြစ်လာ!
- တိုက်ပွဲအဆင့်: တစ်လူသစ် dogfighter ထံမှလေတပ်၏အထွေထွေရန်။ မဟာဗျူဟာကျကျစဉ်းစားပါ, အကောင်းဆုံးလက်နက်နှင့်သင်၏လေယာဉ်တပ်ဆင်: နည်းဗျူဟာအနုမြူဗုံးဒုံးကျည်များ, swarm ဒုံးကျည်များ, လမ်းပြဒုံးကျည်နှင့်အများကြီးပို
- တိုက်လေယာဉ် Customize: မဆို wargame mode ကိုသို့မဟုတ်မြေပုံများအတွက်သင့်လျော်သောကျော်ကို 26 camo: ဆီးနှင်း, pixel သို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်တောက်ပ
- က Non-stop dogfight: deathmatch သို့မဟုတ်အဖွဲ့ကစစ်တိုက်ရာတွင်တိုက်ခြင်းတစ်ကိုယ်တော်စစ်ဆင်ရေးအဘို့အသွားသို့မဟုတ်မဟာမိတ်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါသင့်ကိုယ်ပိုင် wargame ဖန်တီး! သငျသညျ shooters, အမြန်နှုန်းသို့မဟုတ် wargames ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်တစ်ဦးကအကြီးအလေယာဉ်တင်တိုက်ခိုက်ရေး wargame!
အေးစစ်ပွဲ၏အချိန်နှင့်ပုလဲဆိပ်ကမ်းကနေလူမျိုးအပေါင်းတို့သူတို့ရဲ့လေတပ်တပ်ဖွဲ့များတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်: တိုက်လေယာဉ်မဆိုစစ်မြေပြင်ပေါ်တွင်စစ်စက်တွေများမှာ! တိုက်ရိုက်စစ်ဆင်ရေးတိုက်ခိုက်ရေး၌ရန်သူဖျက်ဆီးဖို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်သေစေနိုင်သောလေယာဉ်များထိန်းချုပ်ပါ! ပြိုင်ဘက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးစစ်ပွဲအတွင်းမိုဃ်းချုန်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ကြောင့် blitzkrieg ဘို့အချိန်ပဲ!
Next ကို-Level လေယာဉ်ပျံစစ်ပွဲဂိမ်းတိုက်ခိုက်ရေးသေနတ်သမား။ ပုံမှန်မွမ်းမံမှုများနှင့် 2019 ခုနှစ်၏ PvP ဂိမ်းအသစ်အကြောင်းအရာ။
မပေးကစားရန်အဘယ်အရာကိုဂိမ်းသေချာ? ✈️Modernတိုက်လေယာဉ်ကြိုးစားပါ: Combat PvP ကောင်းကင်စစ်ဆင်ရေးအေ့စ်
အဆိုပါ wargame အကြောင်းကိုမေးမြန်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မဟာမိတ်များကိုရှာဖွေချင်ပါသလား?
Facebook မှာ: www.facebook.com/GDCompanyGames
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.84k 6.78M
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.8.28
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://gdcgames.ru/privacy-policy/
App Name: Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare
Release date: 2019-07-12 18:11:37
လက်မှတ် SHA1: 8E:02:B0:3A:C0:B3:BC:38:0B:FC:C7:0F:4B:CD:B7:06:7E:58:41:6D
အဖွဲ့အစည်း (O): EvilChaotic
Modern Warplanes: Wargame Shooter PvP Jet Warfare APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ